युक्रेनी विमान खसालिएको घटनासँग सम्बन्धित कैयौँ मानिस पक्राउ - Ujyaalo Nepal
प्रधानमन्त्रीले स्वाभिमानकाे गफ दिएकै दिन बढ्याे फेरि इन्धनको मूल्य
युक्रेनी विमान खसालिएको घटनासँग सम्बन्धित कैयौँ मानिस पक्राउ
By ujyaalo	 On २९ पुष २०७६, मंगलवार १७:१४ 68
इरानमा दुर्घटनावश क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी युक्रेनी यात्रुवाहक विमान खसालिएको घटनासँग जोडिएका कैयौँ मानिसलाई पक्राउ गरिएको इरानी न्यायालयले जनाएको छ।
इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले गत साता युक्रेनी यात्रुवाहक विमान खसाल्ने कार्य अक्षम्य गल्ती भएको बताएका छन्। उनले एक विशेष अदालतको निगरानीमा त्यसको छानबिनको हुने बताए।
इरानी न्यायालयका प्रवक्ता गुलामहुसेन इस्माइलीले युक्रेनी यात्रुवाहक विमान खसालिएको घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताए तर उनले त्यसबारे थप जानकारी दिएनन्।
युक्रेनियन इन्टरन्याश्नल एअरलाइन्सको पीएस ७५२ उडान गत बुधवार तेहरानबाट उडेलगत्तै खसालिएपछि त्यसमा सवार सबै एक सय छयहत्तर जनाको ज्यान गएको थियो। अधिकांश मृतकहरू इरानी र क्यनडाली नागरिक थिए।
सुरुमा इरानले त्यो विमान खसालिएको भन्ने विवरण अस्वीकार गरे पनि पछि प्रमाणहरू जुट्दै गएपछि त्यो विमानमा क्रुज मिसाइल प्रहार गरिएको तथ्य बाहिरियो।
मंगलवार त्यस विषयमा बोल्दै इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले युक्रेनी यात्रुवाहक विमानलाई खसाल्ने कार्य अक्षम्य गल्ती भएको बताए। उनले त्यो घटनाबारे गहन छानबिन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
टेलिभिजनमा प्रसारित सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति रुहानीले त्यो घटना दुखद भएको बताए र त्यसका लागि एक व्यक्तिलाई मात्र दोष लगाउन नसकिनेमा जोड दिए।
त्यो विमान खसाल्न आफू जिम्मेवार रहेको इरानी खुलासापछि इरानमा सरकारी झूटको विरोधमा प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्। राष्ट्रपति रुहानीले त्यो घटनापछि सैन्य फौजहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर राम्रो गरेको बताएका छन्।
तर उनले अमेरिकाले इरानी जेनरल कासिम सुलेमानीलाई मारेर ठूलो गल्ती गरेको बताए। उनले अमेरिकाले नै उत्तेजना फैलाएर नराम्रो परिस्थिति निम्त्याइदिएको आरोप लगाए। रुहानीले तेहरानमा विमान खसालिएको घटनासँग जोडिएका अन्य विषयलाई बेवास्ता गर्न नमिल्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित: २९ पुष २०७६, मंगलवार १७:१४
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं. १४७८/२०७६/७७ (सुरू दर्ता नं. ५- २०७३/०७४), युएन मिडिया नेटवर्कका लागि प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक - सूर्य खड्का, कार्यालय :– बानेश्वर-काठमाडौं, फोन :– 9841896857, E-Mail :- समाचारका लागि : फोन नं.०१-५७०५६४४ Uj[email protected],